Dzhon Golt गर्ने हो? Ayn रेण्ड उपन्यास "एटलस Shrugged": को protagonists
प्रश्न "Dzhon Golt हुनुहुन्छ?" - लेजर अमेरिकी लेखक ayn रेण्ड प्रमुख वाक्यांश। यो विरोधी यूटोपियन उपन्यास 1957 मा लिखित। यसलाई "एटलस Shrugged" भनिएको छ। एक अक्षर नाम Dzhon Golt पुस्तक भर invisibly वर्तमान, तर शारीरिक मात्र यसको अन्तिम देखा - तेस्रो भाग।
Dzhona Golta को रहस्य
उपन्यास को पहिलो अध्याय प्रश्न एउटा संवाद सुरु "Dzhon Golt हुनुहुन्छ?"। यो वर्ण को जीवनको अवस्थामा षड्यन्त्र को पाठ्यक्रम मा पाठक लागि परिचित छन्। जन - ओहियो एक साधारण परिवार आउँछ, उनको पिता एक कार मिस्त्री काम गरे। केटा उमेर बाह्र मा आफ्नो आमाबाबुको घर छोडेर। सोह्र मा उहाँले आफ्नै कलेज गए।
तेस्रो - - यी जीवनी तथ्य पछिल्लो स्पष्ट बन्न उपन्यास को "एटलस Shrugged।" लामो समय को लागि पुस्तक यसरी रहस्यमय व्यक्ति चासो fueling, अन्धकारमा पाठक राख्छ। befits कुनै पनि चरित्र रूपमा, gault उल्लेखनीय व्यक्ति थियो। आफ्नो क्षमता को सबै भन्दा दर्शन र भौतिक मा देखियो। यो कलेजमा आफ्नो अध्ययन समयमा विशेषज्ञ यी विद्यार्थीहरू छ।
एक प्रतिभाशाली आविष्कारक
Dzhon Golt - सबैभन्दा रंगीन वर्ण, जो आफ्नो लेखन क्यारियर ayn च्यात्नुपर्थ्यो लागि साथ आए। "एटलस Shrugged" आफ्नो जीवन उपन्यास को कहानी गर्न पूर्व बारेमा मात्र सामान्य जानकारी प्रकट गर्छ। कलेज स्नातक पछि, उहाँले भनिने विशेषता संग बोट मा काम गर्न थालिन् "बीसौँ शताब्दी।" ईन्जिनियरहरु स्थिर बिजुली मा चल्छ भनेर पूर्णतया नयाँ इन्जिन आविष्कार गर्न व्यवस्थित। यो संसारको अर्थशास्त्र परिवर्तन सक्ने एक क्रांतिकारी विकास भएको थियो।
त्यसपछि पुस्तकको लागि आधार बन्यो जो संघर्ष पछि "एटलस Shrugged।" कारखाना व्यवस्थापन आफ्नो आविष्कार gault (सामूहिक) सम्पत्ति बनाउन कामदारहरूको नियन्त्रण कस गर्ने प्रयास र वास्तवमा भएको छ। डिजाइनर दबाब साथ राख्न गर्नुभयो। चाँडै, त्यो कम्पनी ले आफ्नो अवकाश घोषणा।
विद्रोही - प्रश्न गर्न सजिलो जवाफ छ "Dzhon Golt हुनुहुन्छ?"। साँच्चै, एक प्रतिभाशाली भौतिक र दार्शनिक उहाँले अमेरिकी समाज लगाएको जो प्रणाली, बस्न इन्कार गरे। आफ्नै आविष्कार प्रयोग गर्न आफ्नो दाहिने रक्षा, उहाँले अभूतपूर्व मात्रा को स्ट्राइक संगठित। उहाँले प्रतिभाशाली व्यवसायीक को एक किसिम द्वारा सामेल थियो।
Gault चाँडै व्यापार वातावरण, डिजाइनर र निर्माताहरु मा एक पंथ आंकडा भएको छ। तिनीहरूले सार्वजनिक र राज्य-स्वामित्व विकास कम्पनीहरु र अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति दिन चाहने भएन सक्रिय र enterprising मानिसहरू थिए। आफ्नो विद्रोह कहानी को पाठ्यक्रम मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा लोकप्रियता प्राप्त गरिन्छ, समाजवादी र साम्यवादी (बायाँ) मान विरुद्ध निर्देशित देखा छ। यी मान्छे - उज्ज्वल individualists र सबै सामूहिक को शत्रुहरू।
राज्य र अन्यायपूर्ण व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष Dzhon Golt सबैभन्दा आमूल उपाय गए। उहाँले रोक्न र आफ्नै व्यापार नष्ट गर्न धेरै धनी पूंजीपतियों सम्भ्काउनु गर्न व्यवस्थित। उद्यमीहरू को भारी विरोध - मुख्य पृष्ठभूमि उपन्यास को घटनाहरु बाँकी "एटलस Shrugged।" उद्धरण राम्रो काम को अर्थ व्यक्त, तर पनि राम्रो यसलाई ayn च्यात्नुपर्थ्यो को पांडुलिपि शीर्षक पहिलो मस्यौदा बनाउँछ "हडताल।"
आफ्नो नेता को निर्देशन अन्तर्गत सार्वजनिक र सरकारी नियमहरु, उद्योगपति र tycoons इन्कार, एक गोप्य समाज सिर्जना गर्न र जो तिनीहरूले एटलान्टिस भनिन्छ, (आफ्नो विरोधीको टाढा) को कोलोराडो पहाड मा एक बन्दोबस्त निर्माण। पुस्तक भर, Dzhon Golt - काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आंकडा, हुनत त्यो व्यक्ति जसको कथा जान्छ देखि एक वर्ण छ।
Dagny Taggart - "अटलान्टा" को मुख्य हेरोइन। त्यो न्यूयोर्क रेलवे कम्पनी, उनको भाइ जेम्स द्वारा लाग्यौं छ जो को उपाध्यक्ष रूपमा सेवा गरे। कम्पनी दिवालियापन नजिक छ। यसको मुख्य सम्पत्ति (रेलवे), जीर्णता मा आएका ग्राहकहरु जानुहोस्, र हरेक दिन नयाँ घाटा ल्याउँछ।
यी परिस्थितिमा, Dagny unenviable पहिलो प्रश्न सुन्नुहुन्छ: - तर पौराणिक इन्जिनियर र आविष्कारक बारेमा मिथक ध्यान छैन "Dzhon Golt हुनुहुन्छ?"। कम्पनी को उपाध्यक्ष-अध्यक्ष रूपमा, त्यो परिवार व्यापार बचत गर्ने प्रयास गरिएको छ। पुस्तकको पहिलो भाग समयमा यो एक नयाँ रेलवे को निर्माण झगडा छ। सफल र प्रतिभाशाली यूहन्ना Galt को मिथक फाइदा लिएर Dagny बाटो खोल्न भनिएको "लाइन gault।" नयाँ सडक, एक लाभ बनाउँछ कम्पनी दिवालियापन तिरस्कार र पैसा धेरै फिर्ता हुन्छ।
सरकार सुधार लागू गर्न सुरु र बजार अर्थव्यवस्था त्याग्न गर्ने प्रयासहरू गर्दा Dagny nullified अग्रिम। राज्य एक नियन्त्रित योजना अर्थव्यवस्था, राजनैतिक केन्द्र द्वारा नियमन हुनेछ जो सिर्जना गर्न चाहन्छ। यो सोभियत संघ र अन्य कम्युनिस्ट देशहरूमा प्रणाली पनि त्यस्तै हो।
व्यापार दमन सुरु - एउटा महत्त्वपूर्ण कथा काँटा, पुस्तक ayn च्यात्नुपर्थ्यो मा समावेश गरिएको छ जो। "एटलस Shrugged" थप एक dystopian विधा जस्तै छ। स्थिति किनभने आर्थिक संकट को, अझ जब worsens तेल रोक्छ। त्यसपछि नै कुरा कोइला आपूर्ति संग हुन्छ। "एटलस Shrugged" सजिलै गहिरो अराजकता मा कुनै पनि देश डुबाउनु सक्नुहुन्छ किनभने तिनीहरूको गलत निर्णय को कसरी लापरवाह शक्ति देखाउँछ।
Dagny Taggart अन्य गायब ज्ञात व्यवसायी पछि एक टिप्पणी। आश्रय समर्थकहरूको Dzhona Golta - लापता लागि खोजी गर्दा, यो एटलान्टिस जान्छ। सानो शहर मुख्य प्रतीक एक विशाल तीन-खुट्टा डलर शुद्ध सुनको smelted साइन हुन बाहिर गरियो। उहाँको वरिपरि आधुनिक भवन, धेरै निर्मित जहाँ प्रत्यक्ष tycoons, को अधिकारीहरु बाट भाग्ने उद्यमीहरू र वैज्ञानिकहरू।
Dagny एटलान्टिस गर्न प्राप्त - उपन्यास को एक महत्वपूर्ण षड्यन्त्र मोड "एटलस Shrugged।" पुस्तक अन्तमा दुई मुख्य वर्ण confronts। Dzhon Golt Dagny आफ्नो क्रान्तिकारी दृष्टिकोण बताउँछन्। आफ्नो समुदाय - आफ्नै फाइदाको लागि काम गर्न इच्छुक मुक्त मान्छे को एक समूह। अर्थव्यवस्था बन्दोबस्त जहाँ सबैको उत्पादन गर्न सक्षम छ भन्ने खरीदार प्रदान गर्दछ, एक स्वतन्त्र बजार छ। Dzhon Golt भीड र यसको अज्ञानता को इच्छा र बुद्धि विरुद्ध आफ्नो विरोध विद्रोह भनिन्छ।
एटलान्टिस Dagny बासिन्दाहरू पनि आश्रय रहन प्रस्ताव र स्थानीय कानूनको अनुसार बाँचिरहेका छौं। मुख्य हेरोइन सहमत, तर पछि चाँडै आफ्नो मन परिवर्तन Dzhon Golt यो (एटलान्टिस उद्यमीहरू र आविष्कारक यसको सम्पत्ति को deprived समाजमा आफूलाई सबै लुकाउन) माथि रेलवे झटका जाँदै कि बुझ्छ। Dagny जिद्दी। Gault कोलोराडो शरण को गोप्य प्रकट गर्न कहिल्यै प्रतिज्ञा लागि विनिमय फिर्ता साधारण संसारमा उनको ल्याउन सहमत छ।
भाषण Dzhona Golta
Dagny संयुक्त राज्य अमेरिका फर्के। त्यो आफ्नै रेल बचत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, तर यो सरकार मा चलाएका भ्रष्टाचार द्वारा hampered छ। यसैबीच, कारण गरिब आर्थिक अवस्था र देश मा वृद्धि गरिबी दंगे जनसंख्या सुरु गर्नुहोस्। लूटने र हिंसा दैनिक घटनाहरू भएका छन्। व्याकुल मान्छे सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रमा, सबै चोरी सम्पत्ति बुझ्न र आसपास अराजकता छर्न।
राष्ट्रपति स्थिति सुधारने प्रयास गरिरहेको छ। उहाँले जनसंख्याको आश्वस्त पार्नुभयो गर्न टेलिभिजनमा देखा पर्न जाँदै छन्। तर, प्रसारण संकेत को सुरुमा एटलान्टिस मालिक अवरोध। उसपछि भाषण Dzhona Golta - ayn रेण्ड दुई वर्ष लेखेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू प्रकरण। दार्शनिक सरकार निन्दा र आफ्नो नीति को falsity बताउँछन्। उहाँले मानव बुद्धि, रचनात्मकता, घमण्ड र स्वतन्त्रता को महत्व बताउँछन्। यी गुणहरू राज्य सहयोग र लुकाउने जान इन्कार गर्न देश मा सबै भन्दा सफल मान्छे गरे। टिभी को रूपान्तरण मार्फत सम्पूर्ण देश हालै उनको के भयो rethinks। आफ्नो भाषण Dzhon Golt उपन्यास को अन्त्य ल्याए "एटलस Shrugged।" आफ्नो भाषण बाट उद्धरण पश्चिमी राजनीतिक शब्दावली मा र धेरै लेखकहरूले को पुस्तकहरु को पृष्ठ मा सारियो:
"वास्तविकता पहिचान गर्न विफलता सधैं विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउँछ।"
"... जहाँ कुनै विकल्प छ, यो असम्भव मान अस्तित्व छ।"
"शक्ति लागि तिर्खा -। मात्र कारण त्यागेर wasteland मा बढ्छ कि एक तान्नु"
"एक जीत र अन्य हुँदा, यो एक सम्झौता, र ठगी हो।"
"त्यहाँ सकेसम्म कम रूपमा दिन-को दिन काम गर्न उहाँलाई जबरजस्ती गर्न भन्दा एक मानिस नाश गर्न कुनै surer तरिका हो। यो मतवालापन, आलस्य, वा चोरी भन्दा अधिक चाँडै नाश। "
वाणी पछि Dzhona Golta सरकार शक्ति गुमाउन सुरु हुन्छ। Enraged मान्छे, ruinous आर्थिक पाठ्यक्रम outraged तिनीहरूले बिरुवाहरु विनाश अन्तिम कारखाना आगो सेट। देश कैदी को यस्तो ठूलो संख्या समावेश गर्न पर्याप्त जेलमा र गार्ड, छैन। afloat रहन प्रयास, राष्ट्रपति Dzhona Golta फेला पार्न कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट सिकाउँछ। क्रान्तिको बाटो मास्टरमाइंड तल र। क्याच उहाँले टेलिभिजनमा एक तयार पाठ पढ्न बाध्य छ, तर पछिल्लो समयमा gault प्रदर्शन disrupts।
को अधिकारीहरु, यो, यो दार्शनिक सम्भ्काउनु गर्न यसलाई गोप्य इन्धन ट्यांक मा पठाउन र प्रयास सुरु असम्भव छ भनेर साकार। Gault सहयोगिहरु आफ्नो नेता उद्धार गर्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्। पुस्तकको अन्त्यमा, तिनीहरूले आश्रय उड र Dagny को विरोध सामेल गर्ने निर्णय गरे। यसरी पुस्तक निष्कर्ष "एटलस Shrugged।" Protagonists देश होमियो जो विनाश र अन्धकार, हेर्नुहोस्। पछिल्लो दृश्य मा Dzhon Golt unpopulated भूमि डलर चिन्ह भन्दा ड्र।
Andrei Platonov, "Juska": सारांश
रिचर्ड Brautigan: जीवनी र बिब्लियोग्राफी
दानियल Tammet: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, काम
"गुलाबी माने संग घोडा": को protagonists। Astafjevs, "गुलाबी माने साथ घोडा": सारांश
Viktor Krid, Sabretooth ( "Marvel हास्य"): फोटो, जीवनी
एक snuff बक्स के हो र यो कुन प्रयोग गरिन्छ
"अनन्त कल": सोभियत महाकाव्य को सबै भन्दा राम्रो अभिनेता
आमाबाबु बन्न मौका - spouses को karyotype मा विश्लेषण
2114: कर्षण (समायोजन र प्रतिस्थापन)
Setl एस्टेट: सजिलो एक घर खरीद
युक्रेन बाइपास गर्ने रेल को निर्माण तालिका को अगाडी पूरा गर्न योजना
समस्या: "खेल सुरु गर्न सक्दैन: अज्ञात त्रुटि"
मास्कोमा सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी कैफे: फोटो र समीक्षा
को Kaaba भित्र के? एक Hajj को रहस्य को
एक bachelorette पार्टी आफैलाई निमन्त्रणा तयार
मासु कसरी धूम्रपान गर्न र के तातो र चिसो धूम्रपान विशेषताहरु